စက်ဘီးစီးရန် Funny Creative ရေစိုခံ LED မီးပွိုင့်ကိုဝယ်ပါ WoopShop®
စက်ဘီးအတွက်ရယ်စရာ Creative ရေစိုခံ LED သတိပေးမီး
$8.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $14.99
အရောင် အနီရောငျ ပြာသော စိမ်းလန်းသော တောက်ပသော
အနီရောငျ ပြာသော စိမ်းလန်းသော တောက်ပသော
Funny Creative ရေစိုခံ LED စက်ဘီးစီးရန်သတိပေးမီး - အနီရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အမည် - အိတ်ဆောင်ဘက်ထရီစွမ်းအားသုံးစက်ဘီးအလင်း
Mounting နေရာ - Seatpost
Power Supply: ဘက်ထရီ
အနီ၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ ရောင်စုံ
ပါဝါ:2* CR2032 ဘက်ထရီ
အသွင်အပြင်လက္ခဏာ - ရေစိုခံစက်ဘီးသတိပေးမီး၊ စက်ဘီးအလင်း၊ စက်ဘီးအမြီးအလင်း
ပစ္စည်းအရောင်: အဖြူရောင် LED
အရွယ်အစား: 14.5 *6*3စင်တီမီတာ
3 Modes: Bright / Quick Flash / Low Flash
3 မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် Modes သာ
1 * နှလုံးစက်ဘီးအလင်း
31 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
အဆိုပါကှကျလျင်မြန်စွာသို့ရောက်ကြ၏။ silicone မှို၏ပျော့ပျောင်းသောနေရာ၌လက်နှိပ်ဓာတ်မီးလေးတစ်လုံးထည့်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းစွာလောင်ကျွမ်းနိုင်သော်လည်းဒီဇိုင်း၏ချောမွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများရှိသည်။ ရာသီအတွက်စစ်ဆေးပါ။
ကုန်ပစ္စည်းများသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကြက်ဥသည်တရုတ်နိုင်ငံမှရော့စတိုဗက်သို့ ၆၅ ရက်သာလမ်းလျှောက်ခဲ့ရသည်
၃ လစာပို့ပေးပါလား။ အရမ်းရေရှည် !!!
ဒါဟာ kinda ကပြောပါတယ်ကားအဘယ်သို့။ နည်းနည်းလေးပိုသေးသေးလေးရှိရင်ကောင်းမှာပဲ။ အဲဒါမရှိရင်အဲဒါဟာဇောက်ထိုးနှလုံးသားနဲ့တူတယ်။
"အိတ်" အတော်လေးသိပ်သည်းသည်, နွေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမျှော်လင့်ပါတယ်)))